Uvavanyo lwebhetri phakathi kwe-iOS 14.6 kunye ne-iOS 15 beta 1 | IPhone iindaba
Uvavanyo lwebhetri phakathi kwe-iOS 14.6 kunye ne-iOS 15 beta 1
UIgnacio Sala | 11/06/2021 18:00 | iOS 14, iOS 15
Uninzi lwabasebenzisi abathi emva kokufaka ingxelo yamva nje ekhoyo ye-iOS 14, iOS 14.6, baqinisekisa ukuba ubomi bebhetri bezixhobo zabo incitshisiwe kakhulu, nokuba nini Abasebenzisi i-terminal, Ingxaki ekubonakala ukuba iApple ayiyiboni ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uyekile ukusayina i-iOS 14.5.1.
Ngenxa yezi ngxaki ngobomi bebhetri, uninzi lwabasebenzisi abacinga ukufaka i-beta yokuqala ye-iOS 15, ukujonga ukuba iingxaki zebhetri zisonjululwe, ngaphandle kokuba yi-beta kwaye okwangoku kwi-beta yokuqala. Abafana abakwiAppleBytes balwenzile olu vavanyo.
Abafana abakwiAppleBytes benze uvavanyo kwii-iPhone 6s, i-iPhone 7 kunye ne-iPhone SE 2020 iimodeli zokuyiqinisekisa. Ngelishwa, impendulo yalo mbuzo ayikho. Ubomi bebhetri yezixhobo zombini zihlala zisebenza ngokufanayo kuzo zonke izixhobo.
iIfowuni 6s ine-iOS 14.61 iyure nemizuzu engama-49. 100% ubuninzi bebhetri. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
I-iPhone 6s ine-iOS 151 iyure nemizuzu engama-53. 100% ubuninzi bebhetri. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
I-iPhone 7 ene-iOS 14.6Iiyure ezi-3 kunye nemizuzu engama-28. 100% ubuninzi bebhetri. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
I-iPhone 7 ene-iOS 15Iiyure ezi-3 kunye nemizuzu engama-38. 100% ubuninzi bebhetri. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
I-iPhone SE 2020 ene-iOS 14.6Iiyure ezi-3 kunye nemizuzu engama-42. Ubungakanani bebhetri engama-91%. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
I-iPhone SE 2020 ene-iOS 15Iiyure ezi-3 kunye nemizuzu engama-41. Ubungakanani bebhetri engama-91%. Inqanaba lesiGloss kwi25%.
Ngokumiliselwa kwe-iOS 15, uguqulelo esiza kuba nakho ukulifaka kwi-iPhone 6s kunye ne-iPad Air 2, uninzi lwabasebenzisi abangaqinisekanga ukwenza uhlaziyo, kuba inokuba sisigqibo sobabalo lwesiphelo. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi I-Apple isebenze ukuze oku kungenzeki njengoko sasibona kwi Olu vavanyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 14 » Uvavanyo lwebhetri phakathi kwe-iOS 14.6 kunye ne-iOS 15 beta 1
Kukhutshwa i-trailer yexesha lesibini le- "Bona" eliza kuqala kwi-27 ka-Agasti
IOS 15 ivumela abasebenzisi ukuba bacele ukubuyiselwa imali yokuthenga ngaphakathi nohlelo kwiiapps